သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား လေးတွေကို မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ထားခဲ့ကြသလဲ... - Askstyle
💓 ချစ်သူ ရင်တုန်သွားစေမည့် အနမ်း ၁၀မျိုး..😘 အောက်ပါ အနမ်း (၁၀) မျိုးထဲက ချစ်သူကို မေးကြည့်တယ်။ ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်သလဲလို့။ သူကတော့…
အရူးအမူးချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ တစ်ချက်မှမလွဲပဲ ကိုက်ညီနေကြသူတွေပါ….
အရူးအမူးချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ တစ်ချက်မှမလွဲပဲ ကိုက်ညီနေကြသူတွေပါ…. ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းဟာအရမ်းချစ်ကြပေမယ့် အရူးအမူးချစ်တဲ့ စုံတွဲကတော့ ရှားပါတယ်။ အရူးအမူးချစ်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်သွားရင်တော့ စုံတွဲတွေရဲ့ အချစ်ဟာ အရမ်းကို ခိုင်မာသွားပြီဖြစ်လို့…
သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ပုံစံကနေပြောနေတဲ့ သင့်တို့စုံတွဲအကြောင်း... ချစ်သူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့လက်ကိုကိုင်ပုံချင်းမတူတတ်ကြပါဘူး။ တချို့ စုတ်ကိုင်ထားတတ်တယ်။ သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိူးကိုင်လဲဆိုတာ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရွေးပေးပါ။ ဒါမှ သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို…
သင့် စမတ်ဖုန်း ကို ဘယ် နိုင်ငံ က ထုတ်တာလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
အိပ်​​ပျော်​​နေ​တဲ့အမျိုးသမီးကို ခင်​ပွန်း အ​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး သားမယားပြုကျင့်…
ဟက်ကာတွေကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ…
တရုတ် တွေဖျောက်ထား တဲ့ ရာဇ၀င် (မြန်မာပြည်နှင့် တရုတ်ပြည်)
ဗျတ္တလမ်း (သို့မဟုတ်) သူတောင်းစားလမ်း